UJanrain: Thatha kwaye uQinisekise uBukho bakho beNtlalo | Martech Zone
Ke unendawo yakho yemithombo yeendaba ekuhlaleni kwaye uyasebenza. Wongeza abalandeli kunye nabalandeli ngemini kwaye ufumana inkohliso yeendwendwe kwindawo yakho. Imithombo yeendaba kwezentlalo ikunika ukukhula, kodwa awuboni mbuyekezo kutyalo-mali ekuthethwa ngalo kuwo onke amajelo eendaba ezentlalo. Imithombo yeendaba kwezentlalo ibonakala ngathi yile net enkulu, kodwa awubambi nto kuba wonke umntu uyatyibilika emingxunyeni.
Zimbini iziganeko ezibalulekileyo xa kufikwa kwintengiso yemidiya yoluntu:
Ukuguqula umlandeli okanye umlandeli kwithemba okanye kumthengi. Kungenxa yokuba abantu bayakulandela okanye bathande iphepha lakho aliqinisekisi ukuba ngenene baya kukhetha ukungena kwimizamo yakho yentengiso.
Ukufumana umlandeli okanye umlandeli wandise umyalezo wakho kwinethiwekhi. Uthungelwano lwakho oluphambili lunamandla, kodwa alunakuphantse lube namandla njengokufumana ukugcwala kwelizwi ngomlomo kwinethiwekhi yomlandeli.
UJanrain Engage uvala umsantsa kuzo zombini ezi meko, ukubonelela indawo yakho ngendlela yokungena yendawo yonke yokufaka idatha yomsebenzisi, kunye nokubonelela ngeqonga lokwabelana ukwenza ukuba kube lula ukukhulisa imiyalezo yakho kuthungelwano lwabalandeli bakho. Khawufane ucinge xa ​​ukwazi ukubamba idilesi ye-imeyile yomntu wonke ozibandakanya nophawu lwakho ekuhlaleni, ukuze ukhule uluhlu lwakho lwe-imeyile kwaye utyhale izibonelelo ezongezelelweyo kwabo bakhetha ukungena!
UJanrain Engage sisisombululo se-turnkey esixhobisa abasebenzisi ukuba babhalise okanye bangene ngemvume kwindawo yakho ngeakhawunti evela kwi-25 + yenethiwekhi yoluntu kunye nabanikezeli nge-imeyile, kubandakanya u-Facebook, uGoogle, uTwitter kunye no-Yahoo!. Lula ubhaliso, susa isidingo sabasebenzisi sokukhumbula iiphasiwedi kunye nokufikelela kwidatha yeprofayili etyebileyo evela kwiakhawunti yenethiwekhi yomsebenzisi ngemvume.
UJanrain womelele kwaye udityaniswe kakuhle. Ukuba i-CMS yakho yi-WordPress, kukho ifayile ye- iplagi eyomeleleyo ukwenza Ukuzibandakanya kwindawo yakho okanye kwibhlog. UJanrain uphinde adibane neenkqubo ezithandwayo zokuphawula njengeDisqus, i-Echo kunye nePlagi.
Ukuphumeza uJanrain kunokunceda kwimizamo yakho yokuthengisa ngezi zibonelelo zilandelayo:
Yandisa ukubhaliswa kwesiza Ukunciphisa izithintelo kubhaliso, ukukhawulezisa inkqubo yokubhalisa kunye nokwandisa amaqondo okuguqula ukusuka kubakhenkethi besiza kubasebenzisi ababhalisiweyo ngokwenza ukuba ungene kwi-intanethi esele ikhona okanye kwiakhawunti ye-imeyile.
Yenza amaNqaku aBucala aBodwa, aMava okuThatha inxaxheba -Ngaphambi kokugcwalisa iifom zobhaliso kwaye ubonelele ngamava ajolise ikakhulu kubasebenzisi bakho ngokungenisa idatha etyebileyo yomsebenzisi, uluhlu lwabahlobo kunye neencwadi zedilesi.
Khulisa ukuLwazisa ngeBrand kunye nokuvelisa iTrafikhi yokuThunyelwa -Qhagamshela indawo yakho kwiwebhu yentlalo kwaye uxhobise abasebenzisi bakho ukuba basasaze umxholo wakho ngokwenza kube lula kubasebenzisi ukupapasha imisebenzi evela kwindawo yakho kwiinethiwekhi ezininzi zoluntu ngaxeshanye.
tags: Ba ndakanyeeJanrainUJanrain uyabandakanyekaumanyano lwentlaloubhaliso lomsebenzisiukuhlanganiswa kwegamaUbhaliso lwamagama
I-GROU.PS: Zenzele eyakho iNethiwekhi yeNtlalo